JABUUTI Oo La Argagaxsan Dilkii Ugu Naxdinta Badnaa Taariikhda Dalkaasi Kadib Markii Wiil Dhallinyaro Ahi Toorray Ku Dilay Aabbihii, Hooyadii iyo Afar Hablood Oo Ay Walaalo Ahaayeen + Qaabka Dilkaasi U Dhacay – Tusmoonline.com
JABUUTI Oo La Argagaxsan Dilkii Ugu Naxdinta Badnaa Taariikhda Dalkaasi Kadib Markii Wiil Dhallinyaro Ahi Toorray Ku Dilay Aabbihii, Hooyadii iyo Afar Hablood Oo Ay Walaalo Ahaayeen + Qaabka Dilkaasi U Dhacay
Wararka	January 5, 2017	357	Like
Wargeyska FOORE Oo Xogo Dheeraad Ah Ka Helay Dilkii Ugu Argagax Badnaa Dalkaasi JabuutiOo Wiil Dhallinyaro Ahi Ku Khaarajiyey Dhammaan Qoyskoodii + Sawirka Wiilka, Da’diisa, Qaabka Uu Dilkan Foosha Xun U Gaystay, Sidii Uu Saldhigga Booliska Isugu Dhiibay Iyo Dareenka Shacabka Jabuuti
Jabuuti (Tus)- Guud ahaan Dadweynaha deggan Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si weyn uga calool xun dhibaato weyna ay ku noqotay, dhammaan dalkana laga hadal hayaa fal-dambiyeed argagax leh oo aan dalkaasi taariikhdiisa hore u soo marin oo uu ku kacay wiil dhallinyaro ahi kaasi oo habeen hore saqdii dhexe qudha ka jaray dhammaan qoyskiisii oo ka kooban aabihii, hooyadii iyo saddex hablood oo ay walaalo ahaayeen sidoo kalena ay dirqi ku badbaaday gabadh kale oo dhaawac ah oo ay iyana walaalo ahaayeen oo uu sida kuwa hore u dilayay isaga oo dhamaman qoyskoodan dilkooda u adeegsaday saddex mindiyood kadibna toos isku geeyey saldhigga weyn ee Booliska Caasimadda Jabuuti.
Wiilkan dhallinyarada ah oo aannu sawirkiisa helnay balse aanay noo suurto galin warbaahinta Jabuutina sheegin magaciisa ayaa waxa uu goor dambe oo habeenimo mid mid qudha uga jaray shan qof oo qoyskiisa ahaa kuwaasi oo kala ahaa aabbihii, Hooyadii iyo Afar hablood oo ay walaalo ahaayeen oo mid kali ah dirqi ku badbaaday balse isagu u haystay in uu iyana gawracay taasoo wakhtigan lagu dabiibayo cisbitaal Jabuuti ku yaalla. Dilkan naxdinta badan ayaa la sheegay in uu gaystay wiil dhallinyaro ah oo 21-jir ah oo jaamacadda Jabuuti dhiganayay sannadkii saddexaadna ku jiray aabihiina ahaa oday tagsiile ah.
Telefishanka dawladda Jabuuti ee RTD ayaa sheegay in falkani dhacay intii u dhaxaysay 12-kii habeenimo illlaa saddexdii habeenimo.
Xaafadda 7aad ee Magaalada Jabuuti oo uu falkani ka dhacay ayaa gaar ahaan tacsi u fadhida halka dalka Jabuuti oo dhan si weyn looga yaxyaxay falkan naxdinta badan. Kornayl Cumar Xasan Agaasimaha Sagratareega Ciidamada Booliska Jabuuti oo warbaahinta Jabuuti u faahfaahiyey sida arrinkani u dhacay ayaa yidhi:
“Waxa ay ahayd ilaa afartii habeenimo markii uu xerada Taliska Booliska Jabuuti yimid nin dhallinyaro ah. Ninkaasi askartii xerada joogtay ee xalay shaqaynaysay waxa uu u sheegay in uu dhacdo aad u fool xun gaystay oo uu reerkoodii oo dhan gumaaday isaga oo sheegay in uu dilay hooyadii, aabihii iyo saddex qof oo ay walaalo ahaayeen. Isla markiiba ciidankii xalay shaqaynayay way baxeen waxaanay tageen gurigii ay masiibadaasi iyo falkaasi ka dhacay. Markii ay gurigii tageen waxa ay ugu tageen gabadh yar oo dhaawac ah oo middi lagu dhuftay oo uu ninkan walaalkeed ku dhuftay. Markii ay hore u soo galeen guriga ee ay baadhbaadheen waxa ay ugu tageen shan qof oo mayd ah oo guriga dhexdiisa yaalla. Ciidankii kale ee hawlaha noocan oo kale ah ku shaqada lahaa ayaa loo yeedhay oo iyana guriga soo gaadhay. Gaar ahaan ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran falalkan noocan oo kale ah dila ah. Ciidamada ammaanka qaybahoodii kala duwanaa oo dhan ayaa isugu yimid. Macal saraakiishii ugu sarraysay oo aannu ka mid ahayn ayaa soo gaadhay guriga masiibadani ka dhacday. Waxa ay ahayd dhacdo aad u fool xun oo ragagax leh. Shanta qof ee maydka ahaa ee aannu guriga ugu tagnay ee mindida lagu dilay waxa ay kala ahaayeen Aabihii reerka, hooyadii reerka iyo saddex hablood oo ninkan falka gaystay ay walaalo ahaayeen. Gabadhan kale ee dhaawaca aannu ugu tagnay waxa ay ahayd iyana gabadh ay walaalo ahaayeen ninkan oo uu moodayay in ay dhimatay. Gabadhan dhaawaca ah isla markiiba gaadhi ambalaas ah ayaanu ku qaadnay waxaanay gaynay dhakhtarka si loo badbaadiyo. Waxa ay wakhtigan ku jirtaa dhakhtarkii. Way nooshahay laakiin intii kale oo dhammi way wada dhinteen. Baadhitaankii aannu aqalka dhexdiisa ka samaynay waxa aannu helnay midiyihii iyo qalabkii uu ninkani isticmaalay. Dhammaantood waxa uu dadkan ku wada laayay midi. Qof kasta oo mayd ah waxa jidhkiisa ku yaalla nabarro midini ah oo aad u badan. Saddex midiyood ayuu u isticmaalay dilkan oo aannu guriga ka dhex helnay. Baadhitaan caafimaad oo maskaxda ah oo aannu ku samaynay waxa aannu ku ogaanay in uu yahay nin ku talo galay in uu dilkan gaysto. Dacwaddii ugu horraysay ee laga qorayba wuu qiranayaa in uu isagu dambigaa gaystay oo waxba ma qarinayo. Waa nin 21-jir ah oo Jaamacadda Jabuuti dhigta. Sannadkii saddexaad ayuu ku jiraa Jaamacadda. Baadhitaanka ayaan sii wadi doonaa marka aannu dhammayno waxaannu degdeg ugu gudbin doonaa maxkamadda” ayuu hadalkiisa ku soo koobay Kornayl Cumar Xasan.
Dadweynaha xaafadda 7aad (Karate 7) ee Magaalada Jabuuti oo ah xaafadda uu wiilkani qoyskooda ku gumaaday oo warbaahinta dawladda Jabuuti la hadlay ayaa sheegay in inankasi dhallinyarada ahaa ay ku yaqaaneen akhlaad wanaag dhammaan qoyskooduna ahaayeen dad wanaagsan oo xaafadda laga yaqaano balse aanay garanayn waxan ku kallifay dhibaatada intan le’eg ee uu gaystay. Dadweynaha Jabuuti ayaa qof kasta ay halkiisa ku taabatay dhacdadan argagaxa lihi.
January 21, 2018	310	Like
January 8, 2017	356	1